Yellow dock (ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ်) - Hello Sayarwon
Yellow dock (ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ်)
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Yellow dock (ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ်)
Yellow dock (ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ်) ကဘာလဲ။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Yellow-dock ဟာ ဆေးဖက်ဝင် သစ်ပင်တမျိုးဖြစ်ပြီး ရိုးတံတွေကို ဆလတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်သလို အမြစ်တွေကို ဆေးဝါးကုသမှုမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Yellow-dock ကို အောက်ဖော်ပြပါ ရောဂါအခြေအနေတွေမှာ အများဆုံးအသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။
နှာခေါင်းတွင်း နှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းခြင်း။
လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများ။
scurvy လို့ခေါ်တဲ့ ဗီတာမင် စီ ချို့တဲ့ရောဂါ။
Psoriasis လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားရောဂါတမျိုးနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကို အတူတကွ ခံစားရခြင်း။
Yellow-dock ကို သွားတိုက်ဆေးအဖြစ်လည်း အချို့က အသုံးပြုကြပါတယ်။Yellow-dock ကို အခြားသော ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လည်း အသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့အတွက် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုတယ်ဆိုရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေထံ မေးမြန်းသင့်ပါတယ်။
ယခု ဆေးဖက်ဝင်အပင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မပြုလုပ်ရသေးပါ။ အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပါ။ ဒါပေမယ့် yellow-dock မှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတမျိုး (anthraquinones) ဟာ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအာနိသင်ရှိကြောင်းကို လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရ သိရှိရပါတယ်။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
yellow-dock သို့မဟုတ် အခြားဆေးများ သို့မဟုတ် သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများရှိလျှင်။
အခြားသော ဖျားနာမှု၊ရောဂါဝေဒနာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိလျှင် (ဥပမာ သွေးခဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာများ၊ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ၊အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊အစာအိမ် သို့မဟုတ် အူသိမ်အနာဖြစ်ခြင်း၊ကျောက်ကပ်ရောဂါရှိခြင်း)။
အခြားသော အစားအစာများ၊အစားအစာသုံး ဆိုးဆေးများ၊အစားအစာများကို
တာရှည်ခံအောင် အသုံးပြုသော ဓါတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် တိရ စ္ဆာန်များနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းများ ရှိလျှင်။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ဒါမှမဟုတ် နို့တိုက်မိခင်တွေအနေနဲ့ yellow-dock ကို မသောက်သုံးသင့်ပါဘူး။yellow-dock ဟာ ဝမ်းနှုတ်ဆေး အာနိသင်ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ မသင့်တော်တာဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအာနိသင်ကို ပေးတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းတမျိုးဟာ မိခင်နို့မှတဆင့် နို့စို့ကလေးငယ်ဆီကိုလည်း ရောက်ရှိလို့ သွားနိုင်ပါသေးတယ်။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Yellow-dock ဟာ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ဆီးအလွန်အမင်းသွားခြင်း၊အရေပြား ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်ခြင်း၊သွေးတွင်း ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ ကယ်လ်ဆီယမ်ပမာဏ နည်းပါးခြင်း တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အော့အန်ခြင်း၊နှလုံးပြဿနာများဖြစ်ခြင်း၊အသက်ရှူရခက်ခဲခြင်း အစရှိတဲ့ ပြင်းထန်ဆိုးရွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်အထိ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
yellow-dock ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေ ဒါမှမဟုတ် လက်ရှိခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် မသုံးစွဲခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ဦးစွာ တိုင်ပင်ရပါမယ်။yellow-dock နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
Digoxin : yellow-dock ဟာ အူကိုဆွပေးနိုင်တဲ့ ဝမ်းနှုတ်ဆေးဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ဟာ သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏ နည်းပါးခြင်းဟာ digoxin (Lanoxin) ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုလာစေနိုင်ပါတယ်။
ဆီးဆေးများ : yellow-dock နဲ့ ဆီးဆေးတွေကို အတူတကွ သောက်သုံးခြင်းကြောင့် သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏကို အလွန်အမင်းကျဆင်းစေပါတယ်။ အဆိုပါဆီးဆေးတွေက chlorothiazide (Diuril), chlorthalidone (Thalitone), furosemide (Lasix), hydrochlorothiazide (HCTZ, Hydrodiuril, Microzide) စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Warfarin : Yellow-dock ဟာ ဝမ်းနှုတ်ဆေးအဖြစ် အာနိသင်ပြတဲ့အတွက် အချို့လူတွေမှာ ဝမ်းလျှောစေနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းလျှောခြင်းဟာ warfarin ဆေးရဲ့ အာနိသင်ကို ပိုလာစေပြီး သွေးထွက်နိုင်ချေကို ပိုများလာစေပါတယ်။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
yellow-dock ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Yellow-dock အမြစ် လက်ဖက်ရည်ကြမ်း : အမြစ်ခြောက် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တဇွန်း၊နှစ်ဇွန်းလောက်ကို ရေနွေးနှစ်ခွက်စာထဲကို ထည့်ပြီး ဆယ်မိနစ်လောက် နှပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် တနေ့ကို သုံးခါလောက် သောက်ပေးပါ။
Yellow-dock တင်ချာ : သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏမှာ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း နှစ်ဇွန်းစာလောက်ကို တနေ့ သုံးကြိမ်လောက် သုံးစွဲပေးရပါမယ်။
Yellow-dock အမြစ်ရည် : အသက်ရှုလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်း သက်သာရာရဖို့အတွက် Yellow-dock အမြစ်ရည်ကို တခါစားရင် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတဇွန်း ပမာဏလောက် စားပေးနိုင်ပါတယ်။
Yellow-dock အရွက်တွေကို ထောင်းပြီး လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာ တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။
ကုလားချဉ်ပေါင်ငယ် က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
အရွက်ကို ထောင်းထားသော ပုံစံ။
ock. Accessed December 26, 2016.
Yellow-Dock. http://www.herbal-supplement- resource.com/yellow-dock-
herbs.html. Accessed December 26, 2016.
Yellow-Dock. https://www.drugs.com/npc/yellow-dock.html. Accessed December